कता हरायो ४० बुंदे माग, आउनुस् एकपटक फर्केर हेरौँ ! - Nepal's No.1 News portal
कता हरायो ४० बुंदे माग, आउनुस् एकपटक फर्केर हेरौँ !
२०५२ सालमा फागुनमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि यो माग पूरा गर भनेर संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० सूत्रीय माग बुझाएका थिए। जसको नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । यही माग पूरा नगरेको भन्दै माओवादीले फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो। के-के माग थियो त उतिबेला बाबुरामको ? आउनुस्, फर्केर हेरौँ !
माओवादीले जनयुद्ध विद्रोह थाल्नु अघि डा. भट्टराई मार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग राखिएका ४० बुँदे मागहरू :